Choputa osimiri nudist kacha mma na Almería | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | Almería, Osimiri
Almería abụrụla ebe ezumike maka ezumike kemgbe ọtụtụ iri afọ na n'ụsọ osimiri ya, anyị na-ahụ ụfọdụ osimiri kacha mma na Spen niile. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na n'etiti ha enwere osimiri ndị gba ọtọ bụ ndị ọkacha mmasị nke ndị ọbịa. O nwere kilomita 250 nke ụsọ oké osimiri na afọ ole na ole ọ bụ otu n'ime ebe a kacha mara amara maka ndị naturists, ọ bụghị naanị na Spain kamakwa na Europe dum. Nudism sitere na Germany wee nọrọ n'ụsọ mmiri anyị, ebe ọ bụ taa ihe dị ezigbo mma, nke mere na enwere oke osimiri maka ya.
Ka anyị kwuo banyere ya ụfọdụ osimiri kacha mma nudist nwere ike ịchọta na Almería. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmalite n’ụwa ịgba ọtọ, ị nwere ike ịga leta ụfọdụ paradaịs ndị a bụkwa nnukwu aja ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ ma nwee anwụ anwụ. Echefukwala ịnụ ụtọ ahụmịhe a na mpaghara Almería.
1 Osimiri Vera
2 Osimiri Nwụrụ Anwụ
3 Osimiri Genoveses
4 Osimiri Mónsul
5 Osimiri Barronal
6 Ala del Plomo
Ọ bụrụ na anyị gaa kwuo banyere nudism na Almería na-enweghị mgbagha na ị ga-ekwu maka Vera Beach. N'ọtụtụ osimiri, a na-ahapụ ya ịme nudism ma ọ bụ jiri akwa ịsa ahụ, mana na ndị ọzọ, a na-ahapụ ya naanị ịme naturism n'ihi na ọ bụ naanị ya. Osimiri Vera bụ otu n'ime osimiri ndị ahụ naturist ebe anaghị anabata iji akwa mmiri, nke mere na ọ bụrụla ebe kachasị eleta maka ịgba ọtọ. N’ezie, n’akụkụ ụsọ mmiri enwere mmepe obodo nke ndị bi na ya nwere ike ibute ndụ zuru oke na mpụga osimiri mgbe ha na-eme nudism. Osimiri a bụ otu kilomita kilomita na mpaghara a anyị nwere ike ịchọta naanị ụlọ nkwari akụ naturist na Spain, Vera Playa Club.
Osimiri Nwụrụ Anwụ
Osimiri a Ọ dị na Park Park nke Cabo de Gata na ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma mara na Almería. Ọ dị na obodo Carboneros dịtụ anya, ebe ọ bụ na ụsọ osimiri 1600 dị n'etiti mpaghara okike, n'otu ebe mara mma dị ukwuu nke na-adịghị emetọ emetọ. Enwere ọtụtụ ụzọ na-eduga n'ụsọ osimiri mana iji ruo ebe ahụ, anyị ga-eje ije, yabụ na-atụ aro ka ị ghara iburu ọtụtụ ihe. Akwadoghị ya maka ndị nwere obere agagharị ma ọ bara uru njem ahụ. Ọ bụ osimiri ebe ị nwere ike ịme nudism kamakwa egwuregwu dị ka nsị ekele maka mmiri doro anya ya.
Nke a bụ ụdị osimiri ọzọ dị na ogige okike na nke ndị njem nleta si n'akụkụ ụwa niile maara nke ọma. Ọ dị na n'ọnụ mmiri ma nwee jiri aja aja di nma na-enye ya ihe n’ile anya, ebe ọ bụ na e nwere mpaghara nwere obere dunes. N'ebe ugwu, enwere oke ohia nke ichoro site na anyanwu, na eme ya oke osimiri kacha mma iji zuru ubochi dum. Na mgbakwunye, mmiri ya dị jụụ. Ọ nwere nnukwu ebe obibi mara mma na ọ bụ ihe a na-ahụkarị ka ndị mmadụ na-eme nudism n'akụkụ osimiri niile, ọ bụ ezie na ọ bụghị iwu, ma n'oge a, enwere ọtụtụ ugwu.
A maara osimiri a nke ọma ịnọ na otu n'ime ihe nkiri 'Indiana Jones', ma ọ bụkwa otu n’ime ebe aja mara mma na Almería ebe ị nwekwara ike ịgba ọtọ. Ọ bụ naanị 400 mita ogologo, ya mere ọ na-abụkarị ndị jupụtara na elu oge. Ọ na-anọchi anya maka usoro okwute ya nke ugwu mgbawa na maka nnukwu ugwu.
Site na Mónsul beach ị nwere ike ịga n'ụsọ osimiri Barronal n'akụkụ ụsọ oké osimiri. Site na mpaghara ọwụwa anyanwụ anyị ga-eje ije n'ụsọ oké osimiri ruo mgbe mbụ anyị rutere Barronal cove wee banye n'akụkụ osimiri. Mpaghara aja a nwere okpukpu abụọ karịa Mónsul ma bụrụ osimiri a ma ama na-agba ọtọ. Ọ nwere ohere dị mfe ma bụrụ otu n'ime osimiri ndị kachasị ewu ewu Ọ dị mfe ileta. A maara ya nke ọma karịa ọtọ karịa ndị ọzọ dị ka Mónsul ma ọ bụ Los Genoveses ọ bụrụ na anyị chọrọ ịchọ ebe nwere ọnọdụ nudist karịa.
Ala del Plomo
Maka ndị chọta a ọzọ nwere uche ebe ime nudism na ikekwe ọ bụghị ewu ewu dị ka osimiri ndị ọzọ bụ Cala del Plomo. Obere obere okwute di n’agbata okwute okwute ma n’etiti mmadu. Ego a dị naanị narị mita abụọ n’ogologo, yabụ na ọ naghị enye anyị ohere, mana gburugburu ya bụ ugwu mgbawa, nke na-enye ya ụfọdụ ihe nzuzo nke ndị ọzọ enweghị. N'aka nke ọzọ, ọ bụ osimiri mara mma nke nwere ájá ọla edo na mmiri doro anya doro anya na-agba gị ume ka ị zoo mmiri wee gwuo mmiri ruo ọtụtụ awa. Site na cove a anyị nwere ike ịnweta ndị ọzọ dị nso dị ka Cala de En Medio, ebe ị nwekwara ike ịme nudism.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Osimiri » Nudist osimiri Almería ị kwesịrị ịga leta